बलियो बेल्जियमसँग जापान तयार, एसियाको शाख जोगाउला त ? - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
बलियो बेल्जियमसँग जापान तयार, एसियाको शाख जोगाउला त ?
Posted by Pariwartan Devkota | १८ असार २०७५, सोमबार १८:५६ |
१८ असार, काठमाण्डौं । एसियाली राष्ट्र जापान रसियामा जारी विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा पुग्ने एक्लो एसियाली राष्ट्र हो । विश्व फुटबलमा युरोप र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रले दवदवा जमाइरहँदा एसियाली टिमलाई अन्तिम १६ सम्म पुग्नु पनि ठुलो कुरा हो ।
यही एसियाली राष्ट्र जापानले क्वार्टरफाइनल पुग्ने लक्ष्यलाई जीवित राख्दै सोमबार राति अहिले उपाधिको दावेदार मानिएको बेल्जियमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । खेल रोस्टोभ अन डनमा राति ११ः४५ बजेपछि शुरु हुनेछ । जापान समूह ‘एच’ बाट फेयर प्लेमार्फत सेनेगललाई पछि पार्दै अन्तिम १६ मा पुग्न सफल टोली हो । जापानी टिमका प्रशिक्षक अकिरा निसिनोले टिम बेल्जियमविरुद्ध तयार रहेको बताएका छन् ।
‘हामी कठिन संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं । अन्तिम १६ मै हामीले कठिन प्रतिद्धन्द्धीको रुपमा बेल्जियम पाएका छौं । बलियो बेल्जियमविरुद्ध खेल्न हामीलाई पक्कै असहज हुनेछ ।’ प्रशिक्षक निसिनोले भने, ‘समूह चरणमै हामीले कोलम्विया जस्तो बलियो टिमलाई पनि पराजित गरेका छौं । टिमको मनोवल उच्च नै छ । त्यसैले हामी बेल्जियमविरुद्ध जित्ने लक्ष्यमा मैदान उत्रने छौं ।’
लगातार छैटौंपटक विश्वकप खेलिरहेको जापानको २००२ र २०१० को विश्वकपमा अन्तिम १६ मा पुग्नु नै ठुलो सफलता हो । त्यसैले जापान अन्तिम १६ भन्दा अघि बढ्दै जापानी फुटबलमा ऐतिहासिक नाम लेखाउने योजनामा हुनेछ । कोलम्वियाविरुद्ध रक्षात्मक रणनीतिमा खेलेर जित हात पारेको जापानले पोल्यान्डविरुद्धको खेलमा आक्रमक रणनीति अपनाउदा पराजित हुन पुगेको थियो । सेनेगलविरुद्धको खेलमा रक्षात्मक रणनीति अपनाएर खेल्दा खेलमा दुई पटक पछि परेको स्थितिमा पनि बराबरी गर्न सफल भएको थियो । त्यसैले प्रशिक्षक निसिनोले यही रणनीति बेल्जियमविरुद्ध अपनाउने देखिन्छ ।
यता, स्टार खेलाडीहरुले भरिएको बेल्जियम जापानलाई सहजै पराजित गर्दै क्वार्टरफाइनलमा पुग्ने योजनामा रहनेछ । २२ खेलसम्म अपराजित रहेको बेल्जियम यही प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा हुनेछ । बेल्जियमका प्रशिक्षक रोबर्टाे मार्टिनेजले जापानविरुद्धको खेलमा बल पोजिसन आफ्नो पकडमा राख्दै जापानलाई पराजित गर्ने योजना बुनेका छन् । मार्टिनेजको योजनामा रोमेलु लुकाकु, इडेन हजार्ड, केभिन डि ब्रुएन र थिवाउट कोर्टियसले साथ दिनेछन् ।
उपाधिको दावेदार रहेपनि बेल्जियमले अहिलेसम्म विशवकपको उपाधि जित्न सकेका छैनन् । १९८६ को विश्वकपमा चौथो स्थान हात पार्नु नै बेल्जियमको ठुलो उपलब्धि हो । त्यसयता चारवर्ष अघिको विश्वकपमा बेल्जियमले अन्तिम आठमा स्थान बनाएको थियो ।
Previousकेरुङबाट स्वयम्भुसम्म एक खेप सुन ओसारेवापत भरियालाई पचास हजार !
Nextमेक्सिकोको राजनीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन : पहिलो पटक वामपन्थी राष्ट्रपति
हजुरआमाले गरिन नातिको हत्या, प्रहरीद्वारा हजुरआमा पक्राउ
२ भाद्र २०७३, बिहीबार १७:१२
निर्वाचन आयोगमाथी उपप्रधानमन्त्री गच्छादारको आक्रोश किन ?
१७ भाद्र २०७४, शनिबार १३:४०
२८औं राष्ट्रिय पुरुष फुटबल : उपाधिका लागि अाज आर्मी र पुलिस भिड्ने
६ माघ २०७४, शनिबार १०:२६